क्यान्सर आतंक होइन, मुक्तिको उपाय हामीसँगै छ « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
क्यान्सर आतंक होइन, मुक्तिको उपाय हामीसँगै छ
२०७१, ६ चैत्र शुक्रबार १०:०२ मा प्रकाशित
विश्व क्यान्सर दिवस २०१५ः पहुँचबाट टाढा छैन
क्यान्सरको नामनै आम मान्छेका लागि एक प्रकारको आतंक बन्ने गरेको छ । क्यान्सर नेपाली समाजमा त एकप्रकारको बिम्बनै बनेको छ, केही उपाय नलाग्ने अवस्था देखियो भने त्यसलाई क्यान्सरका रुपमा लिइन छ । हुन पनि क्यान्सर रोगका कारण विश्वमा लाखौंको ज्यान गइरहेको छ । स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित युनियन फर इन्टरनेशनल क्यान्सर कन्ट्रोल (युआईसीसी) ले विश्वमा हरेक वर्ष ८२ लाख व्यक्तिको क्यान्सरका कारण मृत्यू हुने गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये ४० लाखको मृत्यू उत्पादनशील वर्ग पर्दछ । यो उमेर ३० देखि ६९ वर्ष समूहको रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, सन् २०२५ भित्र नसर्ने रोगबाट हुने युवा पुस्ताको मृत्यूलाई २५ प्रतिशत घटाउने ग्लोवल लक्ष रहेको छ । नसर्ने रोगमध्येको क्यान्सर पनि एक हो
हरेक वर्ष फेब्रुअरी ४ लाई विश्व क्यान्सर दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । यसवर्ष पनि ‘पहुँचबाट टाढा छैन’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी माघ २१ गते अर्थात फेब्रुअरी २०१५ मा विश्व क्यान्सर दिवस मनाइँदैछ । यस वर्ष क्यान्सर कन्ट्रोलका लागि ४ वटा कुरालाई मुख्य रुपमा केन्द्रित गरिएको छ ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न सेल (कोष) हरुको चक्र (साइकल) नियमित चलिरहन्छ । निश्चित बिन्दुसम्म सेल (कोष) बढ्छ र नयाँ सेल (कोष) उत्पादन गरेर त्यो आफैं मर्छ । यदि यो प्रक्रियामा कुनै अवरोध आएमा कोषहरुको चक्र नियमित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा अत्यधिक कोष उत्पादन हुने र मर्नुपर्ने कोषहरु मर्न छाड्छन् र शरीरको कुनै भागमा अत्यधिक अनाश्यक सेलहरु थुप्रिन थाल्छन् । यसो हुनमा जीनमा हुने न्यूट्रेसनका कारण हो । शरीर जिनबाट बनेको हुन्छ । जीनमा समस्या आउनमा जीवनशैली एउटा पाटो हुनसक्छ भने कतिपय वंशाणुगत हुन्छ । कतिपयमा जीनमा किन समस्या आउँछ भन्ने नै थाहा हुँदैन । चलिरहनुपर्ने साइकल (चक्र)मा कहिलेकाँही एक्कासी खराबी आइदिन्छ र अत्यधिक कोषहरु बढ्न थाल्छन् । यी कोषहरु गुणात्मक तरिकाले बृद्धि भइरहेका हुन्छन् । यसैलाई क्यान्सर भनिन्छ ।
क्यान्सर लागेपछि आयु कति हुन्छ ?
क्रिटिकल केयर ट्रान्सफरमा नेपालको अवस्था
सिकिस्त अवस्थामा रहेको बिरामीलाई स्पेशलाईज्ड हस्पिटलको इमर्जेन्सी कक्षसम्म सुरक्षित तवरले स्थिर अवस्थामा ल्याइपु¥याउन अघि बाटोमा
अस्पताल निरन्तरताको रेसिङः प्रा.डा. मधुको हातमा स्टेरिङ
उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल न्युरो हस्पिटलकी संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रा.डा. मधु दीक्षित देवकोटा । यस बाहेक
जनस्वास्थ्य सरोकार । स्वीजरल्याण्डका डेभिड ह्मजीलाई कुनै समय हिड्न असम्भव थियो । ह्मजी सन् २०१०